राज कुन्द्राले कस्ता फिल्म बनाउँछन् ? उनको फिल्ममा काम गरेकी गहनाले हेर्नुस् भन्दै सार्वजनिक गरिदिइन् न ग्न तस्बिर - Khabar Nepali
होमपेज / मनोरञ्जन / राज कुन्द्राले कस्ता फिल्म बनाउँछन् ? उनको फिल्ममा काम गरेकी गहनाले हेर्नुस् भन्दै सार्वजनिक गरिदिइन् न ग्न तस्बिर
राज कुन्द्राले कस्ता फिल्म बनाउँछन् ? उनको फिल्ममा काम गरेकी गहनाले हेर्नुस् भन्दै सार्वजनिक गरिदिइन् न ग्न तस्बिर
अ श्लि ल फिल्म बनाएको आरोपमा शिल्पा सेट्टीका श्रीमान राज कुन्द्रा पक्राउ परेपछि यो विषय अहिले भारतीय मिडियामा निकै चर्चामा छ । राजकुन्द्रासंग काम गरेका केही नायीकाहरु उनको पक्षमा छन् भने केही विपक्षमा । राज कुन्द्राको पक्षमा अभिब्यक्ति दिँदै आएकी नायीका गहना वशिष्टले सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर सार्वजनिक गर्दै आफुहरु कस्तो फिल्ममा काम गर्छन भन्ने कुरा खुलाएकी छन् । उनले केही खुला तस्बिर सार्वजनिक गर्दै लेखेकी छन्, मलाई यस्तो तस्बिर खिचाउन कसैले दवाव दिएको छैन र मैले पैसा पनि लिएकी छु । उनको फोटो र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल छन्। भर्खरै, गहना वशिष्ठले आफैंको न ग्न फोटो सार्वजनिक गरेकी छन् । जसको साथ उनले लामो क्याप्सन पनि लेखेकी छिन्।
अभिनेत्रीले फ्यानहरुलाई भनेकी छिन् कि उनले यो फोटो खिच्ने क्रममा म पुरा होसमा छु र मलाई कसैले दवाव दिएको छैन । मलाई मेरो इच्छा विपरित तस्बिर लिइएको छैन । यो तस्बिरको लागी भुक्तानी समयमा प्राप्त भएको छ। गहना लेख्छन् कि हामी हयात रीजेन्सी मा यो तस्बिर लिने समयमा लगभग २० मानिसहरु थिर्यौ । म आफ्नो इच्छाले यस्तो तस्बिर खिचाउन राजि भएकी हुँ ।
‘मैले सेटमा कुनै किसिमको जुस खाइनँ। म मेरो पूर्ण होसमा थिएँ। म एउटा अटोमा सेटमा पुगें। फिर्ता पनि म एउटा अटोमा आए, जो सुरक्षित थियो। मैले मेरो भुक्तानी पनि पाएँ। ‘सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि म १८ बर्ष भन्दा माथि उमेरको नागरिक हुँ र एक साधारण कलाकार हुँ। यसैले म तपाइँहरु सबैलाई अनुरोध गर्दछु कि डेढ बर्ष पछि मेरो कुनै पनि निर्मातालाई राज कुन्द्रालाई लगाए जस्तो आरोप नलगाउनुहोस्।
यस संगै, गहनाले हात जोडेको इमोजी शेयर गरेकी छन् ।अन्त्यमा, यो एउटा नोटमा लेखिएको थियो कि यदि कुनै व्यक्तिलाई मेरो पोस्ट अ श्ली ल वा सही लाग्दैन भने मलाई ब्ल क गर्न सक्नुहुन्छ । सामाजिक सञ्जालको यो प्रोफाइलमा मैले कस्ता चिज पोष्ट गर्ने भन्ने कुराको अधिकार मलाई छ । यसमा मँ जे चाहन्छु पोस्ट गर्न सक्छु। धन्यवाद। यो विषयमा उनको नाम आएपछि अभिनेत्री गेहना वशिष्ठले धेरै पटक स्पष्टीकरण प्रस्तुत गरेकी छिन्। राज कुन्द्राको पक्ष लिँदै उनले भनेकी छन् आफुहरुले अ श्लि ल फिल्म बनाउँदैनन् का मु क फिल्म बनाउँछन् ।